Izindlu e- EeBee - I-Airbnb
Izindlu e- EeBee
Eagle Bay, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Luxury Breaks
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Luxury Breaks izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
***** Ukubuyekezwa Kwezinkanyezi Ezi-5 - Indawo yomndeni enhle - Ikhaya elihle elinakho konke okunethezeka okusenzelwe wonke umndeni ukuba ujabulele. Ukusondela kuso sonke isifunda kufanele kunikeze ukubukwa Okumangalisayo nendawo enhle yokuhlala yangaphandle. *****
**INTENGO IHLANGANISA UKUQASHWA KWELINEN, UKUHLANZA KANYE NEZINDIKAKO**
I-EeBee House iyikhaya lethulwe ngendlela encomekayo futhi eligcwele umlingiswa elibekwe endaweni enhle yasehlathini enezindawo ezinhle zokubuka. Ukuphunyuka okuphelele kwangasese, uzojabulela ilanga lasehlobo elihle kakhulu ngenkathi uphumule futhi ulalele imisindo yasehlathini ingoma yenyoni kanye nokuheleza komoya phakathi kwezihlahla.
I-EeBee House itholakala endaweni efunwa kakhulu yogu lwase-Eagle Bay, uhambo lwemizuzu engu-7 ukusuka endaweni yokuthenga, ikhefi kanye nendawo yokudlela yaseDunsborough, futhi igudle ichweba kanye ne-A Class Reserve. Ibekwe endaweni ekahle yokujabulela amanzi acwazimulayo nezihlabathi ezicwazimulayo ze-Eagle Bay Beach, iBunker Bay noma amabhishi okubhukuda ase-Old Dunsborough noma i-Quindalup kanye nezindawo ezinhle zokungcebeleka zangaphambili. Noma zulazula uye ezindaweni ezidumile zokudayisa iwayini, izindawo zokudlela nezindawo zemibukiso; noma izindawo ezingasogwini nezimangazayo ezizungeze iKapa.
Ukwakhiwa kwefreyimu yomhlaba kanye nezingodo ezisetshenziswa kakhulu ingilazi ukuphuza elangeni lasebusika kuhlanganisa izinzuzo ze-solar zomumo wezindlu futhi kuzungeze indawo yokuzijabulisa ye-alfresco emaphakathi. I-EeBee House ihlukaniswe yaba ngamaphiko amabili alungele ukwabelana ngamaholide omndeni okubili noma okunwetshiwe.
Igumbi lokuphumula elikhulu linhle kodwa linethezekile, linamasofa asesitayeleni kodwa amemayo kanye ne-TV yesikrini esikhulu. Umkhathi wamafasitela wakha isikhala esilula nesinomoya esinomoya omuhle ophambanayo ngalezo zinsuku zasehlobo futhi sifinyelela esikhaleni esihle se-allfresco.
Ikhishi elihlome ngokuphelele linikeza isitofu sikagesi/ihhavini, umshini wokugeza izitsha, ifriji / ifriji eyodwa, imicrowave, ibhentshi lasesiqhingini kanye nomshini wekhofi weNespresso.
Izinketho zokudlela zifaka phakathi indawo yasendlini enezihlalo ezingu-8 noma itafula langaphandle elinezihlalo ezingu-8 elikahle ngalobo busuku obupholile, ekuseni libalele noma ngesidlo sasemini.
Umlilo wezinkuni endaweni ngayinye yokuhlala uzoqinisekisa izinsuku zasebusika ezipholile kanye nobusuku futhi unikeze ukubukeka okujabulisayo. Abalandeli be-Ceiling endaweni yokuhlala namagumbi okulala.
Ukulungiswa kwegumbi lokulala:
1.I-Master Suite: Umbhede wenkosi, hamba ugqoke ingubo, ihlathi kanye ne-bay views. I-Ensuite
2.Igumbi lendlovukazi: Umbhede wendlovukazi
3.Igumbi Elilodwa: 2 x Imibhede Eyodwa
4.Igumbi eliphezulu (phezulu): I-Queen bed
Indlu yokugezela enkulu ineshawa, okuyize kanye nendlu yangasese ehlukene.
Indawo ephakeme emaphakathi, ehlotshiswe nge-alfresco enophahla olunyusiwe lwesitayela se-pagoda izoba nguzibuthe wendawo yakho yokuhlala yangaphandle neyokudlela. Ngesilungiselelo sokudlela, amasofa angaphandle kanye ne-BBQ inokuthula, yinhle, inemibono emangalisayo futhi izokukhuthaza ukuthi uhlale isikhathi eside ngesikhathi sokudla kwakho. Indawo yokudlela uphumule iwubukhazikhazi obugcinelwe ukubaleka okuhle ngamaholide njengokunikezwa kwe-EeBee House.
Gxila ebuhleni bemvelo bale ndawo kungaba amapaki neziqiwi; amathrekhi asehlathini noma amabhishi amahle angasese. Kunama-boatramp e-Dunsborough nase-Quindalup; amabhishi okubhukuda nama-surf; izindawo ezinamatshe nama-cove, izindawo ezivikelekile kanye namakhefu amahle kakhulu okubhukuda. Noma uma uthanda kukhona izindawo ezimangalisayo zokudayisa iwayini, izindawo zokuphuza utshwala, amapulazi omnqumo, amafekthri kashokoledi noshizi, izinketho zezolimo nezokuvakasha kwemvelo, izindawo zokudlela ezinhle nemipheme ongazihlola.
Sibheke ngabomvu ukukwamukela ku-EeBee House futhi siyaqiniseka ukuthi leli khaya nendawo kuzoba ngelinye lamakhefu akho owathandayo.
Ngenkathi i-WIFI ihlinzekwa kulesi sakhiwo, kwesinye isikhathi kungaba namaphutha ezintweni zikagesi kanye/noma ukucisha okuhlobene nesimo sezulu okungase kuphazamise ukusebenza. Uma ukufinyelela ku-WIFI kubalulekile ngezinjongo zomsebenzi kungase kube ubuhlakani ukuletha idivayisi ye-WIFI ephathekayo.
**UKUZOTHOLA IMINININGWANE YENQUBOMGOMO YOKUKHANSELA YALESI NDAWO, SICELA UTHINTE U-EJESHI OLAWULA IKHOPI LEMIBANDELA NEMIBANDELA YESIvakashi**
Ibungazwe ngu-Luxury Breaks
Hlola ezinye izinketho ezise- Eagle Bay namaphethelo